Fihenam-bidy fanodinana vidin-tsolika | XiongYe
Mpanome lanja mavesatra dia ny vokatra vaovao, vokatra tsy misy loko sy tsy misy fofona. Ny karazana sombin-tsoratry ny sombin-tsolika dia karazany vaovao amin'ny birao fiarovana ny tontolo iainana polystyrene EPS. Ity vokatra ity dia tsy misy loko sy tsy misy fofona. Izy io dia afaka mampitombo ny habetsahan'ny haben'ny eps foam board sy ny vokatra fonosana eps amin'ny vokatra polystyrene foam. Ny fampiharana marina ny akora polystyrene dia misy fiatraikany lehibe amin'ny lafiny maro. Taorian'ny fampiasan'ny mpanamboatra maro azy io dia miharihary ny fiakaran'ny lanjany. Ny vokatra dia manana ny mampiavaka ny lelafo ihany koa, tsy misy poizina, fiarovana ny tontolo iainana, manamafy, ambany ny vidiny, ary mora ampiasaina. , Aorian'ny fampiasana azy, ny vokatra dia manana ny mampiavaka ny lelafo, ny lanjany, ny loko mamirapiratra ary ny hamafiny. Ny fitaovana fitsitsiana angovo dia ampiasaina amin'ny fantsom-boaloboka, fonosana kely, takelaka sns, ny tabilao maivana dia mampiakatra 1 ka hatramin'ny 2 kilao isaky ny metatra toratelo, ary ny tabilao mavesatra dia mampiakatra 3-5 kg.
EPS polystyrene foam board agents mavesatra matihanina mpamatsy entana mpamatsy.
EPS foam board agents mavesatra dia mizara ho karazana sombina sy karazana ranoka. Manokana, ny fahombiazany sy ny hakitroky ny tabilao fampiharana dia tsy mitovy. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny takelaka sandwich vy miloko sy ny endrika granular amin'ny fanapahana endrika; karazana granular sy ranoka ho an'ny takelaka insulation rindrina ivelany sy tabilao fanafanana gorodona dia azo ampiasaina, ary izy ireo koa dia azo afangaro ho an'ny fitomboan'ny lanjany sy ny fiaretan'ny lelafo. Ny vokany dia tsara kokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny antoko iray dia afaka mahazo lanja 2-3 kg nefa tsy misy fiatraikany amin'ny bika aman'endriky ny birao. Izy io dia fitaovana fanampiny ilaina ho an'ny orinasan-tsambo EPS foam board sy orinasa benzene board. Nampiakarina any ivelany ireo vokatra.
1.Ny vokatra tsara kokoa dia mampitombo lanja
3.Tsy misy harafesina ho an'ny milina.
4.Ny vokatra tsara kokoa noho ny afo.
5. Fiarovana tsy misy poizina sy tontolo iainana.
6.Ny vidiny mora
Ampitomboy ny tombony 150-500 $ / taonina, ny kilao iray dia soloina akora eps iray kilao.
Manaraka: Akora EPS